Hira fiderana : Nahatafita ny hafany ny Tanora Masina Itaosy -
AccueilVaovao SamihafaHira fiderana : Nahatafita ny hafany ny Tanora Masina Itaosy
Niaka-dapa. Anisan’ireo antoko mpihira manana ny lazany amin’izao fotoana. Nahatafita ny fahany tamin’ireo hira fiderana ny Tanora Masina Itaosy nandritra ny fampisehoana notanterahin’izy ireo tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Anisan’ireo seho fihaonana ataon’ny Tanora Masina Itaosy amin’ireo mpankafy azy ny seho goavana toy izao. Tonga maro nanohina ny antson’ireo mpikambana ao amin’ny antokom-pihira ny mpijery izay niara-nidera an’Andriamanitra tamin’ny hira sy ny vavaka nandritra ny fampisehoana. Azo lazaina fa feno ny fepetra maha-seho goavana ny fampisehoana noho ny sehatra sy ny fitaovana samihafa nampiasaina, ary indrindra ny fisian’nyfahitalavitra lehibe nahafahan’ireo mpijery nanaraka ny tonon-kira sy niara nihira tamin’izy ireo. Nitarika sy nitondra ireo hira sy vavaka samihafa ny lehiben’ny antoko mpihira Tanora masina Itaosy, Lovaniaina Rakotondraiavo, izay sady mpamorona sy mpandritra ny hiran’izy ireo. Anisan’ny ahafantarana ny Tanora Masina Itaosy nyhiran’izy ireo mitondra hafatra, na miainga amin’ny tenin’Andriamanitra na miainga amin’ny zava-misy. Anisan’ireo nanakoako tetsy Mahamasina omaly ny « Matokia », « Mamelà ny Nosinay », « Ahy Jesosy »…. Teny anelanelan’ireo ny vavaka ho an’ny Tanindrazana, ny mpitondra, ny vahoaka Malagasy…
Anisan’ny tolotra tsy nampoizina tamin’ity fampisehoana ity ny fahatondavan’i Sedy, izay mpamorona ny antoko mpihirana monina any ivelany any, toy izany koa ny fivahinianan’i Laurent Rakotomamonjy nitondra hira vitsivitsy.